२०७६ जेठ २८ मंगलबार ०६:०५:००
बीबीसी । अमेरिकामा मात्र एक दिनमा १८ लाख किताब बिक्री हुने गर्दछ भने बेलायतमा पनि प्रतिदिन पाँचलाख भन्दा बढी किताबहरु खरिद गर्ने गरिएको छ । यसरी अहिलेको समयमा मान्छेसँग अनेकौँ विकल्प भएपनि अझै किताब पढ्न मन पराउँछन् भन्नेमा कुनै शंका छैन । वास्तवमै किताबले हाम्रो ज्ञान र लेखन शीप बढाउनुका साथै विश्वबारे धेरै कुरा सिकाउन सक्छ । तर के पढ्नुले हामीलाई राम्रो मान्छे पनि बनाउन सक्छ ?
काल्पनिक रचना अर्थात ‘फिक्सन’ बारे विभिन्न दाबी गरिँदै आएको छ । जस्तै स्वयम्सेवालगायत दान धर्मका कार्यमा वृद्धिदेखि मानिसलाई भोट हाल्न प्रोत्साहन गर्ने र दशकौँ बितिसक्दा हिँसामा कमी आउनुका पछाडि समेत किताबलाई ठूलो श्रेय दिने गरिएको छ । ग्रिकका महान मनोविश्लेषक एरिस्टोटलले भनेका थिए, “जब हामीले कुनै ट्राजिटी हेर्छौँ हामीमा दुई प्रकारको भावना व्याप्त हुन्छ – पात्रप्रति सद्भाव र आफ्ना लागि डर । यसमा थाहै नपाइ हामी तिनको ठाउँमा भए त्यो अवस्थामा कस्तो प्रतिक्रिया दिने थियौँ होला भनेर तुलना गरिरहेका हुन्छौँ र विगतका व्यवहार वा भविष्यमा आइपर्न सक्ने कुराबारे पनि सोच्ने गर्दछौँ ।”
त्यसैले पनि किताबले हामीलाई अरुको परिस्थिति बुझ्ने अभ्यास गराइरहेको हुन्छ । यसबारेमा क्यानडाका संज्ञात्मक मानसिक रोग सम्बन्धी चिकित्सक केइथ ओट्लेले ‘फिक्सन’ लाई दिमागको उडान प्रवृत्ति सक्रिय गराउने तत्वको नाम दिएका छन् । जसरी एउटा पाइलटले जमिन नछाडिकन उड्ने अभ्यास गर्छ त्यसरी नै फिक्सनले पनि हरेक चोटि किताब पल्टाउँदा मानिसको सामाजिक कुशलतामा सुधार ल्याउन सक्छ । उनले गरेको एक अनुसन्धानअनुसार हामी किताबका पात्रसँग परिचित हुन थालेसँगै उनीहरुको लक्ष्य र चाहनालाई आफ्नै जीवनको ठान्ने गर्दछौँ । जस्तै उनीहरु खतरामा भए भने हाम्रो मुटु बेस्सरी धड्कन थाल्छ वा हामीले लामो सास फेर्न सक्छौँ । तर अर्कोतर्फ हामी त्यो सबै हामीसँग भइरहेको छैन भनेर कताकती ढुक्क भएर पनि पढिरहेका हुन्छौँ । यसरी वास्तवमा किताबका केही प्रभावकारी वाक्य वा घटनामा लेखिएका शब्दहरु पढ्दैगर्दा हाम्रो मस्तिष्क पनि त्यससँग सम्बन्धित शारीरिक प्रक्रियासँग जोडिन थाल्छ ।
यसरी कथासँग अगाडि बढ्न हामीले के भइरहेको छ कुन पात्रले के सोचिरहेका छन् लगायत तिनको परिस्थिति र भावनाबारे जान्नैपर्ने हुन्छ । यो बुझ्ने क्षमताका लागि ‘थेउरी अफ माइन्ड’ नामक शीप आवश्यक पर्छ । जस्तै हामीले किताबमा पात्रका सोचहरु पढ्दा मस्तिष्कमा थेउरी अफ माइन्ड सम्बन्धी क्षेत्र सक्रिय हुन थाल्छ । यसकारण पनि फिक्सन पढ्नेहरुको सामाजिक क्षमता नपढ्नेहरुको भन्दा राम्रो हुने गरेको बताइएको छ ।
यस अनुसन्धानका लागि ओटेली र उनका सहकर्मीले केही मानिसहरुलाई फरकफरक भावना व्यक्त गरिरहेको मानव आँखाको तस्बिर हेर्न लगाएका थिए । यस परीक्षणमा केबल आँखा हेरेर उनीहरुले त्यो मान्छेले कस्तो महसुस गरिरहेको छ भन्ने बताउनु पर्दथ्यो जसमा पछुतो, लाज, दिउँसै सपना देखिरहेको लगायत उत्तरका विभिन्न विकल्प पनि प्रदान गरिएको हुन्छ । यसरी पहिलो झलकमा ती आँखामा कुनै भावना देखिँदेन र गहिराइसँग हेर्दै गएपछि मात्र तिनका भाव स्पष्ट हुन्छन् । यस्तोमा धेरै फिक्सन पढ्नेहरुले नपढ्नेको तुलनामा उच्च स्कोर हासिल गर्न सकेका हुन् । त्यस्तै अन्तर–व्यक्तिगत संवेदनशीलताको स्केलमा पनि किताब पढ्नेहरुले बढी अङ्क हासिल गरेको पाइएको हो ।
‘प्रिन्सेटन सोसल न्युरोसायन्स ल्याब’ की मनोविश्लेषक डायना टामिरका अनुसार मान्छेले सामाजिक अन्तरक्रियामा सुधार ल्याउनकै लागि पनि बढी किताब पढ्ने गरेका छन् । जस्तै यसले हामीलाई अगाडिको मानिसले के सोचिरहेको छ, के महसुस गरिरहेको छ भन्ने थाहा दिन्छ । यसका लागि उनले सञ्चालन गरेको ब्रेन स्क्यानमा पनि किताब पढ्दै गर्दा हाम्रो दिमागका ती अंश सक्रिय हुने गरेको पाएकी हुन् जसले हामीलाई आफ्नो अन्य व्यक्तिको भाव र सोच बुझ्न बाध्य गराउँछ । त्यसैले पनि उपन्यास पढ्नेहरुले औसतमा तुलनात्मक रुपमा अरु मानिसको भाव सजिलै बुझ्न सक्छन् तर के यसले उनीहरुलाई राम्रो मान्छे बनाउँछ ? यस कुराको परीक्षण गराउनका लागि वैज्ञानिकहरुले थप अनुसन्धान गरेका हुन् ।
यसमा उनीहरुले मनोविश्लेषण सम्बन्धी तरिका अपनाएका छन् । सबैभन्दा पहिले अनुसन्धानमा सहभागीहरुलाई एउटा छोटो किताब पढ्न लगाइएको हो । किताब पढ्दैगर्दा उनीहरुले दिमागका त्यस भित्रका पात्र र परिस्थितिको चित्र बनाए कि बनाएनन् भन्ने प्रश्न गरिएको थियो । त्यस्तै कथा पढिसकेपछि उनीहरुले पात्रका बारेमा के थाहा पाए भनेर पनि सोधिएको हो । यसपछि अनुसन्धानकर्ताहरुले अर्को कोठाबाट सामान लिन गएको बहानामा आउनेक्रममा एक दर्जन कलम भुईँमा खसाएका हुन् । यस्तोमा पात्र र कथाप्रति सबैभन्दा धेरै सद्भाव व्यक्त गर्नेहरुले नै कलम टिप्न मद्दत गरेको पाइएको हो । यसमा हामीले ती व्यक्तिहरु पहिलेदेखि नै मद्दतगार स्वभावको हुन सक्ने अन्दाज लगाउन सक्छौँ तर अध्ययनकर्ताहरुले ती कुराहरुलाई पनि ध्यानमा राखेर यस्तो निष्कर्ष निकालेका हुन् ।
त्यस्तै डच रिसर्चरहरुले पनि एउटा छोटो अवधिको अनुसन्धान गरेका हुन् । जसमा उनीहरुले विद्यार्थीहरुलाई ग्रीसको राजनीति सम्बन्धी पत्रिकाको लेख र नोबल पुरस्कार प्राप्त गर्न सफल उपन्यास ‘ब्लाइन्डनेस’ पढ्न लगाएका हुन् । सो उपन्यासका मुख्य पात्र अचानक आफ्नो कारमा बसिरहेका बेला आँखा देख्न छाड्छन् जसपछि सडकमा हिँड्दै गरेका एक बटुवाले उनलाई घर पुर्याइदिने भन्छन् तर उल्टै गाडी चोरेर भाग्छन् । यसरी पत्रिकाको तुलनामा सो कथा पढेपछि विद्यार्थीहरुमा भावनात्मक स्तर वृद्धि हुनुका साथै उनीहरुको साधारण दृष्टिकोणमा पनि परिवर्तन आएको पाइएको हो । उनीहरुको भावनामा वास्तवमै त्यो कथाले गहिरो प्रभाव पारेको थियो जसको असर धेरै पछिसम्म देखा परेको हो । अनुसन्धानकर्ताहरुका अनुसार त्यसको एक हप्तापछि उनीहरुको भावुकता झन वृद्धि भएको पाइएको हो ।
हो हामी फिक्सनबाट मात्र होइन पत्रपत्रिका पढेर पनि भावुक हुने गर्दछौँ । तर यस कुरामा फिक्सनका तीन फाइदा छन्–जस्तै उपन्यासमा हामीसँग पात्रको आन्तरिक संसारको पनि पहुँच हुन्छ जुन हामीले पत्रिकाबाट सामान्य अवस्थामा प्राप्त गर्न सक्दैनौँ । यसैगरी हामीले मान्छेको सत्यतामाथि प्रश्न नउठाइ अविश्वासलाई निलम्बित गर्ने गछौँ । अन्त्यमा हामीले उपन्यासमार्फत पात्रहरुको जीवन वर्षौँदेखि हेरिरहेका र अध्ययन गरिरहेका हुन्छौँ जुन वास्तविक जीवनमा अत्यन्तै कठिन हुन्छ ।’ यसकारण पनि फिक्सन पढ्नाले मानिसले राम्रो बानी र उचित व्यवहार देखाउने स्पष्ट छ ।